आइक्यानसँग नबिल बैंकको सहकार्य, अव सदस्यता शुल्क अनलाइनमार्फत नै तिर्न सकिने !
ARCHIVE, CORPORATE » आइक्यानसँग नबिल बैंकको सहकार्य, अव सदस्यता शुल्क अनलाइनमार्फत नै तिर्न सकिने !
काठमाडौँ- नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र नबिल बैंकबीच 'इलोक्ट्रोनिक पेमेन्ट गेटवे (इपीजी) एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौतासँगै अव आइक्यानका सदस्यहरुले आइक्यान नै गएर पैसा बुझाउने झन्झटबाट मुक्त हुने भएका छन् । उनीहरुले सदस्यता वा सर्टिफिकेट अफ प्राक्टिस (सीओपी) नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्क अव नबिल बैंकको इपीजी सेवाबाटै तिर्न सक्ने भएका छन् ।
गत जुन २० तारिखमा आइक्यान र नबिल बैंकबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । आइक्यानका तर्फबाट आइक्यानका कार्यकारी निर्देशक संजय कुमार सिन्हा र नबिल बैंकका तर्फबाट सनत पौडेलले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा आइक्यानका अध्यक्ष प्रकाश जंग थापा, उपाध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय र नबिल बैंकका सीइओ अनिल शाहपनि उपस्थित थिए ।
साथै आइक्यानले विद्यार्थीका लागि पनि यो सुविधा छिट्टै लयाउने बताएको छ । साथै नबिल बैंकले कार्ड स्वापिङ मेसिनसमेत आइक्यानमा राख्नेगरी सम्झौता भएको जानकारी आइक्यानले दिएको छ ।